RW Ku-xigeenkii Ahaana Wasiirkii Arrimaha Dibadda Hore ee Soomaaliya oo Geeriyoodey – Radio Daljir
Agoosto 16, 2017 6:12 b 0
Aalla ha u naxariistee waxaa xalay magaalada San Diego ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ku geeriyooday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, Cabdiraxman Jamac Barre.
Geerida Cabdiraxman Jamac Barre ayaa waxaa xaqiijiyey wiil uu adeerk u yahay Diriye Maxamed Siyad Barre oo hadda ku sugan gobolka Virginia. Marxuumka ayaa waayadan danbe xanuunsanayey.
Cadiraxman Jamac Barre ayey da,diisu aheyd 79 sano. Wuxuu xilal kasoo qabtay dowladii kacaanka, isaga oo soo noqday ra’isulwasaare ku xigeen, wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda.
Wuxuu ifka uga tagay 15 caruur ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho.